Mpanamboatra rindrambaiko natsangana - Shina nanangana firafitra ho an'ny tany, mpamatsy
Fanitsiana ny tilikambo telecommunication 12m
4-tongotra telecom tower 4-Legged Angular Tower dia tilikambo miaro tena namboarina amin'ny lamina fototra toradroa. Ny tilikambo dia nohamarinina ho an'ny enta-mavesatra ho an'ny enta-mavesatra ary matetika no mety ho an'ny tranokala finday voalohany, tranokala misy hazondamosina MW, na foibem-pifandraisana foibe. Vokatra natolotray Ny vokatra dia manarona ny tilikambo eo an-tampon-trano ka hatrany amin'ny tilikambo telecom 60m. Raha ny safidin'ny karazana tilikambo telecom dia mihoatra ny tilikambo andalana. Ohatra, tilikambo tokana, tilikambo vy tubular, tilikambo vy zoro, faran'ny sns. Afaka manao ...
Fanaraha-maso ny sefo telecommunication 12m
Fanitsiana ny tilikambo fifantohana 12m Mba hahazoana antoka ny fiasan'ny rafitra fifandraisana tsy misy tariby, ny antena serasera amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny teboka iray mba hampiakarana ny tariby fanamafisam-peo an'ny antena serasera mba hahatratrarana ny vokatra fifandraisana tadiavina. Ao amin'ny trano fonenana an-tanàn-dehibe, tranobe misy birao, ary tranobe misy birao hananganana tobim-pifandraisana, mazàna ny antennas de serasera dia ampitomboina ny haavon'ny antennas, bao antena na ...
Rooftower 12m Mba hiantohana ny fiasan'ny rafitra fifandraisana tsy misy tariby, ny antena serasera amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny teboka iray mba hampiakarana ny tariby fanamafisam-peo an'ny antena serasera mba hahatratrarana ny vokatra fifandraisana tadiavina. Ao amin'ny trano fonenana an-tanàn-dehibe, tranobe misy birao, ary tranobe misy birao hananganana tobim-pifandraisana, mazàna ny antennas amin'ny fifandraisana dia mampitombo ny haavon'ny antennas, bao antena na tilikambo antena, ka ny ant ...